U-Douglas C-117 GARMINS
Umbuzo U-Douglas C-117 GARMINS
izinyanga 4 5 Sekwedlule izinsuku #1435 by milesg
Kulungile ntambama .... okokuqala lapho ngilayisha lolu bhanoyi lwasebenza kahle kakhulu ... ngeshwa ngafanele kabusha fsx..ngokuthi-ke angikaze ngenze ukuthi ama-GARMINS asebenze..awavuli. Ngazama ukuzishintshanisa nama-garmins we-BASLER ngaphandle komphumela ... Ngicabange ukuthi ngenze iphutha ngakho-ke angizange ngilayishe kabusha i-C-117 futhi nomsebenzi we-GARMINS ... Noma imiphi imibono ezobonga ... Noma yisiphi isidingo semininingwane eyengeziwe ngicela ubuze me ..... Ngiyabonga.
izinyanga 4 4 Sekwedlule izinsuku #1437 by CUA5532
Kungenzeka ukuthi kufanele ufake kabusha isengezo ngemuva kokusetha kabusha noma ukufaka kabusha isimiso sonke. Ngemuva kokuthi ufake kabusha, uma ingakavulwa, ungazama ukuchofoza ku-"C".
izinyanga 3 4 Sekwedlule amaviki #1445 by indyharley
qhafaza kwesokudla kuduku lwe- "C". (amandla)
Isikhathi ukudala page: 0.314 imizuzwana